कुनैपनि ब्रेकिङ न्यूज हालिएको छैन ।
वि.सं. २०७७ आषाढ २७ शनिवार
जय बागेश्वरी मन्दिरको बाहिरी संरचना भत्काउँदा भेटियो भित्री मन्दिर
चन्द्रमणि भट्टराई | २०७६-०५-१९ | ८५५ ५
अहिलेका लागि काम रोकियो, भोलिबाट अध्ययन हुने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा ८ क्षेत्रमा रहेको जय बागेश्वरी मन्दिर पुननिर्माणको काम रोकिएको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले माथिल्लो तलामा क्षति पुगेको मन्दिर, पुननिर्माणका क्रममा भित्री भागमा ३ वटा गजुर भेटिएपछि, मन्दिरको वास्तविक संरचना कस्तो थियो, अध्ययनको खाँचो देखिएपछि काम रोकिएको हो । यस संरचनाका बिषयमा जान्ने मान्छे नभेटिनु तथा अभिलेख नपाइनुले पनि काम रोक्नु पर्ने अवस्था आएको हो । भेटिएका गजुरहरु भित्री भागमा भएकोले माटो टाँसिएको, केही भाग नष्ट भएको, बाङ्गो टिङ्गो भएको अवस्थामा छन् । यिनीहरु कुन धातुका हुन्? सुनको लेप थियो कि थिएन? बाहिरी आँखाले पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था छैन । यिनीहरु भित्री गारोको आडमा छन् ।
मन्दिरका बिषयमा लिखित र प्रमाणिक दस्तावेज प्राप्त नभएकोले हामीले बाहिरी संरचनाको मात्र नक्सा उतारेका थियौं । भित्री संरचना पुननिर्माणका क्रममा भत्काउने समयमा हेर्दै ड्रइङ् गर्ने भन्ने शर्तबमोजिम काम भइरहेको थियो । पशुपति क्षेत्र बिकास कोषको योजना महाशाखाका निर्देशक भरत मरासिनी भन्नुहुन्छ — यो के हो भनेर बुझाउने कोही भेटिएनन् । भट्ट हेर्दा कोही शक्तिशाली व्यक्तिले भित्री मन्दिरलाई यथावत् राखेर बाहिरी संरचना थपेको जस्तो देखिन्छ । मन्दिर पुननिर्माण थालनी गर्दा यस्तो होला भन्ने सोचाइ नै थिएन । भत्काउँदै जाँदा अचम्म तरिकाबाट गजुर भेटिएपछि अध्ययनका लागि पुरातत्व बिभागलाई भनेका छौं ।
मन्दिरको गजुरतर्फबाट तल हेर्दा दुई तहमा निर्माण भएको देखिन्छ । बाहिरी तह र भित्री तहका गारो, गारो बनाउन प्रयोग गरिएको माटोको रङ्ग फरक देखिन्छ । यसबाट मन्दिरको दुई तह फरक—फरक समयमा नै बनाइएका हुन् कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, कसले बनायो? कहिले बनायो, तथ्य भेटिएको छैन । मन्दिरको पुननिर्माण हेरिरहेकी पुरातत्व बिभागकी पुरातत्व अधिकृत अमृता महर्जनकाअनुसार — मन्दिरमा रहेको महासरस्वतीको पाउमा भेटिएको अभिलेखका आधारमा मन्दिर लिच्छवीकालमा निर्माण भएको हो । त्यसपछि बि. सं. १७३१ देखि १७३७ को बीचमा नृपेन्द्र मल्लका पालामा यसको जीर्णोद्धार गरिएको थियो । पशुपति क्षेत्रका बारेमा शोध तयार पारेर बिद्यावारिधि उपाधि लिनुभएका डा. गोबिन्द टण्डनका अनुसार — यस क्षेत्रमा पहिलो र दोश्रो शताब्दीमा लघु आकारका मातृशक्तिका मूर्तिहरु थिए । सन्दर्भ सामाग्री उल्लेख गर्दै डा। टण्डन थप्नुहुन्छ — भाषा बंशावली र गोपाल बंशावलीमा यसको बिस्तृत बिवरण पाइदैन ।
मन्दिरका पूर्व मुल पुजारी मृत्युञ्जय कर्माचार्यका अनुसार यो मन्दिर १९९० सालको महाभूकम्पमा केही पनि भएको थिएन । उहाँलाई आफ्ना पूर्खा कसैले पनि भन्दिर भत्किएको वा पुननिर्माण गरिएको कुरा सुनाएका थिएनन् ।
मन्दिर पुननिर्माणका लागि गएको बर्ष फागुन २ गते क्षमा पूजा गरिएको थियो । त्यसपछि समयमा काम हुन सकेन । एकपटक क्षमा पूजा गरेर त्यसको ६ महिनाभित्र काम थालनी नभए फेरि अर्कोपटक क्षमा पूजा गर्नुपर्ने मान्यताअनुसार गएको बिहीबार (भदौ १२ गते) दोश्रो पटक पूजा गरेर पुननिर्माण कार्य थालनी गरिएको थियो । जयबागेश्वरी भण्डार तहबिल कार्यालयका पचली नाइके बिनोद बैद्यका अनुसार मन्दिर सञ्चालनका लागि ५०० रोपनी जग्गा थियो । बत्तीसपुतली, कपन, जोरपाटी, बौद्धलगायतका ठाउँमा मन्दिरको जग्गा छ । त्यहाँबाट आएको आम्दानी र सम्बद्धले दिएको सहयोगबाट पूजा पाठ र यससँग सम्बन्धित जात्रा पर्व सञ्चालन भइरहेका छन् ।
पर्व लक्षित सरसफाइका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफलमा महानगर Previous Post
४७१ शेयर सदस्य रहेको महानगरका कर्मचारीको सहकारीमा ३ करोड ९१ लाख ९९ हजार ६९७ रुपैयाँ बचत परिचालन Next Post
सम्पदा पुनर्निर्माणको अवस्था बुझ्न राष्ट्रपति भण्डारीबाट अवलोकन भ्रमण
Last Updated on 06th July 2020, Monday 04:08:58 pm